Abakhiqizi be-Glass Pump Bottle, abahlinzeki - China Glass Pump Bottle Factory
I-12oz 350ml igwebu lesandla elihambisa impompo ingilazi yebhodlela yokuwashwa kwesikhucululi
Lawa mabhodlela engilazi acacile ayisinqumo esihle sokugcina kahle insipho ewuketshezi noma ekhihliza amagwebu, ama-lotions nokuningi., Kungaphansi okujiyile okubukeka kuklanywe kahle, ipompo ekhihliza ipulasitiki ayinayo i-BPA futhi umbala ungenziwa ngezifiso. Cabanga ngokuthengwa kwenqwaba ukuze uthokozele amanani ethu ashibhile
8oz 250ml amber ingilazi ibhodlela ngensimbi engagqwali igwebu futha dispenser
Ibhodlela lengilazi eliyindilinga elinompompi wensimbi engagqwali iyinsipho enhle kakhulu futhi ingasetshenziswa njengebhodlela le-shampoo, noma i-conditioner noma i-lotion. Amabhodlela engilazi amnyama asetshenziselwa ukugcina uhlanganiso lwamafutha abalulekile / i-aromatherapy ngoba avikela amafutha elangeni, ngaleyo ndlela asize ukuwagcina emisha isikhathi eside.
Kokubili i-foam ne-liquid dispenser iyatholakala!
355ml 12oz ecacile ingilazi isandla insipho ibhodlela nge matte black engagqwali igwebu futha dispenser
Ibhodlela elingu-12oz elisobala nxazonke elinompompi ohambisa insimbi omnyama ongenagwele ungagcwaliswa futhi uguquguqukayo. Zingasetshenziswa kuma-lotion, insipho, okokuhlanza noma ekuphekeni. Ingaphezulu lensimbi engagqwali ebhodleleni lengilazi lihlala isikhathi eside kakhulu. Insimbi engagqwali ingagezwa, isetshenziswe futhi ihlanzwe lapho kudingeka, futhi ingagcinelwa zonke izinhloso; la mabhodlela engilazi enziwe ngengilazi ewugqinsi futhi angagezwa ngomshini wokuwasha izitsha.
Ibhodlela lensipho lesilazi lesandla esingu-400ml ngensimbi engagqwali ikhipha impompo futhi nomkhono abicah
Lawa mabhodlela engilazi ajwayelekile weBoston Round ayindlela enhle yokugcina kahle insipho engamanzi noma ekhihliza amagwebu, ama-lotion nokuningi. Umbala wesiliva obhulashiwe ongu-304 ongagqwali opompa amagwebu ngeke ugqwale. Siphinde futhi sinikeze isisekelo sokuvikela abicah samabhodlela amaphampu!
Okwakudala kwanoma iyiphi indawo yokugezela noma ikhishi. Le 8oz amber ingilazi ibhodlela insipho dispenser kuyinto isitsha nenhle umkhiqizo wakho oyithandayo. Iphampu yepulasitiki emnyama ingavulwa ukuze uqaqe ibhodlela, elehlisa imfucuza yokupakisha futhi liyindlela enhle yokugeza izandla. Izinto eziyinhloko zengilazi ye-amber (isihlabathi, i-soda ash ne-limestone) zitholwa endaweni ukusiza ukuvikela okuqukethwe emisebeni ye-UV.
16oz ecacile boston round pump pump nge plastic liquid dispenser
Leli bhodlela lengilazi elisobala elinomshini wokuhambisa izinto yindlela elula yokuhlinzeka ngesikhucululi sesandla. Ingaphezulu lempompo alikhishwa, elingagcwalisa ibhodlela lakho ngomkhiqizo okhethiwe isikhathi eside futhi linciphise imfucuza yokupakisha. Ingilazi ecacile ibukeka yinhle ngensipho yesandla ecacile noma enemibala, engeza ukubukeka kwemvelo nokulula kunoma iyiphi indawo yokugezela. Okwakudala kwanoma iyiphi indawo yokugezela noma ikhishi. Ngelebuli yokulinganisa ukuze ukwazi ukubhala injongo yokusebenzisa kuyo!
8oz 16oz matte black liquid insipho dispenser ingilazi ibhodlela
Le bhodlela le-matte elimnyama lensipho yokuhambisa ephethe ipompo emnyama, itholakala ngo-8oz, 16oz, 32oz nomunye umthamo. Ilungele insipho, i-shampoo, i-conditioner, i-body wash, i-sanitiser yezandla neminye imikhiqizo ewuketshezi.
16oz 500ml umbala omhlophe Boston round ingilazi uketshezi insipho ibhodlela ngensimbi engagqwali dispenser
Ibhodlela lokuhambisa insipho lengilazi eline-aesthetics emsulwa nehlanzekile. Lezi zimishini zokuhambisa insipho ezimhlophe ze-matte zilungele ukuqoqa nokwenza lula indlu yokugezela, futhi ziza nesembozo sephampu sensimbi engagqwali esingavulwa ukugcwaliswa kabusha. Ibhodlela lethu lokuhambisa ingilazi insipho kuyindlela enhle futhi engokwemvelo kumabhodlela epulasitiki, okuvumela ukuthi wakhe ukubukeka okuncane kunakho konke ekhaya lakho lonke.
Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha, Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Glass Bottle Nge Spray Pump, Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo,